SEO: Gini bu ichota ihe njin
Thursday, June 3, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Naanị m gụrụ ya na Inc.com, WordPress kachasị maka SEO. Ug. Ọ na-ewe iwe na saịtị nke ụdị ahụ na-enye akụkọ na-abụghị eziokwu dị ka nke a.
Achọpụtara WordPress maka Search Engine Optimization.
Amaghị m otú ị ebuli maka njikarịcha ma ọ bụ ihe nke ahụ nwere ike ịpụta. Dị ka usoro njikwa ọdịnaya, WordPress na-enyere njikarịcha, mana ọ dịkarịrị gị, isiokwu WordPress gị na plugins WordPress gị iji bulie saịtị WordPress ma ọ bụ blọgụ gị nke ọma.
N'echiche m dị umeala n'obi, enwere ihe anọ dị na njikarịcha njikarịcha njin nchọta ihe:
Na-enyere SEO kacha mma omume ya na nke gi n'elu ikpo okwu, dị ka robots.txt, pings, na XML saịtị map. WordPress n'ezie anaghị eme nke ọ bụla n'ime nke a… ị ga-achọ ịmepụta faịlụ robots.txt gị, mee ka pinging gaa na isi mmalite kwesịrị ekwesị, ma gbakwunye generator saịtị.
Na-achọpụta isiokwu gị, na-achọpụta mmewere peeji na-etinye nke ọma ma na-ahazi saịtị ahụ n'usoro n'usoro, na-achọpụta na ibe na-akwalite n'ụzọ ziri ezi n'ime. Ọtụtụ ndị na-emepụta isiokwu leghaara mkpa nke ihe dị ka aha peeji na isiokwu anya. Constfọdụ rụọ na peeji nke na-etinye sidebar ọdịnaya n'ihu na peeji nke ọdịnaya na layout. Isiokwu a haziri nke ọma nwere ike melite etu igwe njin ọchụchọ si ele ọdịnaya gị yana usoro ha na-egosipụta ọdịnaya gị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebido blog ma ghara iche echiche otu esi ahazi ọdịnaya ha kpam kpam na site na igodo ha. Nke a nwere ike ịkpata nsogbu, ọkachasị ma ọ bụrụ na inwere ọnụọgụ nhọrọ nke isiokwu iji kwụsị.
Na-achọpụta gị content site n'iji Keywords na ị maara ga-adọta ma gbanwee ndị ọbịa n'ime ndị ahịa na saịtị gị. Emere nke a dịka akụkụ nke ngwungwu ịde blọgụ nke ụlọ ọrụ dịka Ngwakọta, ma WordPress enweghi ọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla iji mee nke a. Ka ga-eme nyocha ahụ n'onwe gị ma jiri ngwá ọrụ dịka odeakwụkwọ iji nyere aka (Ode akwukwọ maka WordPress ngosi video).
Ihe igwe ojii nke SEO bụ na ọtụtụ n'ime ihe ị na-eme na saịtị ahụ anaghị emetụta ogo gị dị ka ihe ị na-eme pụọ. Ide ihe dị egwu, ọdịnaya dị mkpa nke na-adọrọ uche (na backlinks) nke saịtị ndị ọzọ nwere ike ime ka ị bụrụ ọkwa nke ọma. Mana nke ahụ enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na WordPress na ihe ndị ọzọ ị ga - eme na ị na - akwalite ozi blọgụ gị, jikọta blọgụ gị na ntanetị mmekọrịta, ma kwalite ya site na nkwupụta na usoro ndị ọzọ. Ghọta ebe ịkwalite blog gị na ịkwalite ya nke ọma ga-emekwu ihe maka njin ọchụchọ gị karịa ikpo okwu gị!
N'ikpeazụ, SEO bụ ọ bụghị otu ihe omume, ndebanye ma ọ bụ ọrụ. Ebe ọ bụ na ndị na-asọmpi gị (yana Internetntanetị niile) na-agbanwe mgbe niile na Google na-aga n'ihu na-agbanwe algorithms ya kwa ụbọchị, ogo gị ga-anọgide na-agbanwe. Denye saịtị gị na Google Search Console, Bing Webmasters na Yahoo! Site Explorer, nlekota oru n'usoro na ngwaọrụ dị ka Authoritylọ Ọrụ Njikwa na Semrush bụ usoro na-aga n'ihu nke ịkwesịrị ịgụnye iji hụ na ị kachasị nke ọma.
SEO bụ usoro nke nyochaa ogo gị na ịme mgbanwe ndị dị mkpa iji hụ na ịchọta ọdịnaya gị na nke ọma maka okwu ndị na-enyere azụmaahịa gị aka.
Nke ahụ bụ nkọwa m!
Tags: search engine njikarịchaChọọ MarketingAkedu ihe bụ seo
Jun 3, 2010 na 7: 36 PM
Nabata gị, DK!
Nzọụkwụ ọzọ: weghara France!
Biko ị nwere ike inye anyị ihe atụ nke ebe ịkwalite blog gị?
Jun 3, 2010 na 7: 58 PM
Iza okwu banyere blọọgụ onye isi ụlọ ọrụ ama ama bụ ụzọ dị mma iji gbatị iru blọọgụ gị. Syndication site na Twitter (na hashtags), ibe Facebook na Facebook (kpọọ ndị enyi gị na ọbụlagodi ịmalite Facebook Ad), yana imelite ọnọdụ na LinkedIn yana njikọta azụ na post bụ ụzọ dị ukwuu nke nkwalite.
Jun 3, 2010 na 8: 04 PM
You na-abanye na netwọkụ mgbasa ozi ndị ọzọ? Squidoo? Dezie? Sụọ ngọngọ?
Jun 7, 2010 na 10: 00 PM
Ezigbo nnyocha. Ọ bụrụ na m na-anụ ma ọ bụ na-ahụ “SEO njikarịcha” otu oge ọzọ, M na-agbarapụ ya! Anọ m na Tesis na blọọgụ nke m oge ụfọdụ, ọ na-arụkwa ọrụ ya (mana anaghị m atụnyere ya na isiokwu asọmpi). Nụrụ ọtụtụ ihe dị ukwuu gbasara odeakwụkwọ, yabụ aga m elele ya ugbu a ị kwadoro ya, kwa. Amalitere m iji Raven maka nsuso SERP (nke ahụ bụ peeve anụ ụlọ ọzọ, bịa kwuo ya: Mgbe ndị mmadụ na-ede "nsonaazụ SERP") na m hụrụ ya n'anya.
Onweghị ihe ndị a bụ SEO ọla edo na aka ya. Enweghị ngwọta dị mfe, dị ka ị rụtụrụ aka. Anyị kwesịrị ịnọ n’elu ya, nyere ibe anyị aka mgbe ọ bụla o kwere omume, ma jụọ maka ngwa ọrụ ga-eleba anya n’ihe anyị rụtụrụ aka.